Asingabo bonke abasebenzi baya kusinda bitcoin ekunciphiseni iindleko - Blockchain News
Asingabo bonke abasebenzi baya kusinda bitcoin ekunciphiseni iindleko
kufuneka bitcoin malini iindleko ukuze imigodi kwakhona ibe bubulumko?
A 70% ukuhla kwixabiso bitcoin ukususela embindini ka December phantse zanciphisa inzuzo kwemigodi. Kwinqanaba yanamhlanje ixabiso, ukuwa ubuncinane $ 6,048, kuphela ngabasebenzi inkulu banokuhlala lezimali. Kodwa uhlalutyo Bloomberg ebonisa ukuba phakathi ezibambe wonke ezisindayo.
namhlanje, 67% le imigodi-eneji buzinze ezandleni kumaqula ezine: BTC.com, AntPool, SlushPool and BTC.top. Kodwa Bloomberg umhlaziyi Tim Kulpan iyaqinisekisa: “Ukuba akunguye na inkampani elawula le ufakelo zemigodi fastest zithengwa ngamaxabiso ngokuphangaleleyo, ngoko kusenokwenzeka ukuba ukulahlekelwa yimali.” ukunyuka Disemba zinyuke kwimarike lwemigodi yi 40%, nto leyo eyakhokelela ukuba ukungalingani kwenkqubo: ngokutsho Blockchain.info, ibiyi 51% nzima ndikhuphe ibhloko.
Likhulile zombini ukuntsonkotha izibalo kunye isixa eneji edliwe. Ukuba bitcoin wemisa mini-50 iavareji of $ 13,200, ke kunye nobuntsompothi yangoku kunye nenani hashes, lo muntu avareji nezixhobo wayeza kufumana $ 80 ngeveki (kodwa abadala izixhobo, inowuthi inzuzo). kunjalo, nkqu ufakelo bitcoin-yokombiwa kakhulu phambili musani ukukhusela ngokuchasene umngcipheko imali yokulahlekelwa, xa ixabiso lehla kakhulu, kwaye lizoba uhlala kwi network: ngabasebenzi zilimale ukuqala kwindawo ngexabiso $ 6,800.
Ukuba ixabiso lingaphumi, ngoko ke emgodini avareji ziya kuphulukana $ 3 ngeveki. namachibi Mining, ezifana AntPool, singaba kwintsimi eyakhayo, kodwa inzuzo yabo iya kuba 90% ngaphantsi nge iavareji imini-50 ka $ 13,200.
Tim Kulpan ukuve- kuphela, ngokombono wakhe, isimo, apho kwemigodi siya kuphinda lube nenzuzo: ukukhula bitcoin kunye kwakhululwa okugunyazisiweyo yinxalenye basemgodini ukusuka umdlalo ukuze sinciphise ukhuphiswano. Umhlalutyi liqinisekile ukuba abathathi-nxaxheba bonke namhlanje akuyi kuba nako ukuba siphephe ukulahleka: mhlawumbi othile kukhulula “umkhumbi kwemigodi” ukusuka ubunzima bayo, okanye wonke iza kurhaxwa.
Ukuba ngaba umntu labucala kwaye ufuna zemigodi Bitcoin nabanye Cryptocurrency, ngokuba kuhle ukuba enze oko nge Cloud Mining, ahlawule imali ziingcali kunye kunandipha iingenelo ukuba iinkampani ezinkulu ukufumana. Nazi phezulu 3 Iinkampani ze Cloud Mining: Hashflare, IQMining okanye Genesis Mining
Coinbase wenza 43% ka yayo 2017 ...
Price ogcwele: Great profits l...
bitcoinblock chainimigodi yelifulizobaimigodiiindaba
Post Previous:ezine kuphela eneji Crypto bathobele iimfuno umlawuli South Korea
Post Next:Technologies ezintsha Ngaba sebeza Sombulula Scalability Bitcoin kaThixo